बुढो हुदाहुदै अर्कैसंग म,स्ती ! घर आउदा न पैसा न श्रीमती | प्रहरी सामु उल्टै यस्तोसम्म भयो -हेर्नुस - NaulooDhun
May 10, 2021 adminLeaveaComment on बुढो हुदाहुदै अर्कैसंग म,स्ती ! घर आउदा न पैसा न श्रीमती | प्रहरी सामु उल्टै यस्तोसम्म भयो -हेर्नुस
बुढो हुदाहुदै अर्कैसंग मस्ती ! घर आउदा न पैसा न श्रीमती | प्रहरी सामु उल्टै यस्तोसम्म भयो -हेर्नुस |।
बच्चाहरुको हामिले धेरै नै ख्याल गर्नुपर्छ । बच्चाहरु चनचले हुने हुनाले कुनै पनि बेला नसोचेको घटना हुन सक्छ । धेरै बच्चाहरुले अरुको सिको गर्दै नसक्ने काम पनि गर्न खोज्छन् ।जसले गर्दा नसोचेको दुर्घटना निम्तिन सक्छ । यस्तै भारतमा एक अनौठो घटना घटेको छ । सुन्दा अचम्म लग्ला, भारतको गुजरातस्थित भावनगर जिल्लामा एक बच्चीको शिर प्रेसर कुकरमा फसेपनि धेरै नै समस्या भएको छ ।अचानक एक वर्षकी बच्चीको टाउको कुकरमा फसेपछि अस्पताल लगियो । अस्पतालमा बच्चीलाई अक्सिजन दिएर कुकर निकाल्न प्रयास गरियो । तर निकाल्न सकिएन ।
यो पनि पढ्नुहोस् , मेरो भनाइमा सहमत हुनेले सेयर गर्नुस। म पनि महिला हु तर श्रीमानलाई बिगार्ने महिलानै हुन्। हामी महिलाहरु ले नै पुरुषलाई भ्र’ष्टाचारी जड्याहा। पर स्त्री गमन ‘बाहिर मन तन डुलाउने घरमा बस्न मन नगर्ने’ एस्तो स्वभाव को हुन बाध्य बनाउछौ। आफ्नो श्रीमानलाइ अनावश्यक तनाव ‘अरुको धन सम्पत्ती वा गहना सङ्ग तौलेर’, अनावश्यक केयर बारम्बार निगरानी केरकार, माइती वा साथीहरू आफन्तको सामु हेपेर वा होच्याएर बोल्ने यस्ता काम कहिले नगर्नुहोस्.नेपाली श्रीमान साच्चिकै देवदुत सावित हुनेछ्न ग्यारेन्टी।
पशुपति परिषदबाहिर रहेको सवारी पार्किङमा साधन राखेर भित्र प्रवेश गरेलगत्तै विभिन्न ठाउँमा सवारी साधन प्रवेश निषेध भनेर लेखिएको पोस्टर टाँसिएको थियो। तर, जति नैतिकताको भाषण गरे पनि हामी ब्ववहारिक भने छैनौं। आफ्नो सहजताका लागि पशुपति मन्दिरको छेउसम्मै सवारी साधन लैजानेको ठूलै ताँती थियो ।मानिसहरुको चाप बढ्दो थियो। म पुलमा बसेर त्यही भीड हेरिरहेको थिएँ। यता बाग्मतीको किनारमा लास जलाइरहेका थिए, पशुपतिअगाडि आरती हेर्ने मानिसहरुको हुल थियो। मानिसको जीवन के नै छ र ? कुन दिन मर्ने अत्तोपत्तो छैनझैं लाग्यो, एकछिन त्यही जलाइरहेको लास हेरिरहें। तर, त्यो पीडाभन्दा खुशी हुन त मानिसहरुको भीड नै उपयुक्त लाग्यो।
जुमबाट पढाइरहेका बेला शिक्षककी श्रीमती कक्षामा पसेर रोमान्स गर्न थालेपछि…(भिडियो)